I-Studio Apartman Central Location Ukupaka okungabhatalelwayo - I-Airbnb
I-Studio Apartman Central Location Ukupaka okungabhatalelwayo
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguEdit
Silindele iindwendwe zethu zoshishino ezifuna ukuphumla kwindawo enobuhlobo, ezolileyo, embindini wesixeko, kwimizuzu embalwa xa zihamba ngeenyawo ukusuka kwi-Main Square. Kwiflethi okanye indlu yethu ekwicomplex enezixhobo eziyi-42, siyabamkela abo beza kuthi ngamaxabiso afanelekileyo unyaka wonke. Istudiyo sine-terrace enezihlalo zegadi apho iindwendwe zethu zinokonwabela ilanga ukususela emini. Kukho ibhegi yeyadi evaliweyo eyadini yesakhiwo seflethi, iindwendwe zethu ezinokuyisebenzisa simahla.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ine-Wi-Fi ebanzi kuyo yonke le flethi okanye indlu ekwicomplex,ibe iTV iyafumaneka ukuze ibonwe ngamajelo amaninzi angaphandle nezasekhaya. Ikhitshi lethu line-microwave, ifriji, ioveni yombane kunye ne-hob, umatshini wekofu weNespresso, i-toaster, iketile kunye nezinto zokupheka, iipleyiti, njl. Inayo yonke into oyidingayo ukuze uhlale iiveki eziliqela. Kwihlobo lika-2021, siye sayilungisa ngokupheleleyo iflethi okanye indlu yethu ekwicomplex ngokwezidingo zeendwendwe zethu.
Le ndawo ikhuselekile ngokupheleleyo, kuthatha imizuzu embalwa ukusuka kwiivenkile ezikufutshane, iivenkile zokutyela, iibhanki, abantu abatshintsha imali, iivenkile zokutyela, iziko lokuthenga kunye neendawo ezinomtsalane kubakhenkethi ezifana: neCifra Palace, iNdlu yeTeknoloji, iBozso Collection, iMyuziyam iFunk Arena Toy kunye neNgqungquthela, njl njl. Kwiindwendwe zethu ezinomdla kumculo, sikwacebisa neKodály Institute edumileyo, ekwimizuzu embalwa ezayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Edit
I'm interested in nature,travel,art,gastronomie and good wines.Also I am fond of Jazz music. When the summer comes then I go for a long walk in nature. And afterwards I read a great book and drink a good wine in the balcony.
Ndisoloko ndifumaneka ukuba uyandidinga, ungandithumelela umyalezo ku +36 307418999
Inombolo yomthetho: EG19018547
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kecskemét